CHERRY "URAL RUBY": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, BEERASHADA IYO DARYEELKA - CHERRY
Cherry "Ural Ruby": sifooyinka iyo beerista agrotechnik
Cherry "Ural Ruby" waa baadiyaha yaryar ee gaadhaya dhererka hal mitir iyo badh. Sawirro dhowr ah oo ah cherry this waxaa lagu soo bandhigay maqaalka.
Kala duwanaantan ayaa leh wax-soo-saarka wanaagsan waxayna sidoo kale la qabsan kartaa xaaladaha cimilada adag.
Cherry loo qaato kala duwan yihiin ubax goosashada, miraha wanaagsan oo isku wada dhafan.
Dhiirigelinta "cherry Ural Ruby" ayaa markii ugu horreysay la qaaday 1950kii. Bartamaha qarnigii 20aad, beeraha Ural N. Gvozdyukova, oo matala Saldhigga Xerada Dhakhaatiirta ee Sverdlovsk ee Ural NIISH, ayaa mashruucan la wada shaqeeyay S. Zhukov, oo matalayay Sheybaarka Guud ee Xarunta. I.V. Michurin. Wakiil ka socda hay'adda Tambov ayaa bixiyay geedo aan la garanayn oo "Michurinsky" oo aan la garanayn oo saldhig u ah noocyo cusub. Dadka Ural waxay isticmaalaan miraha kala duwan ee kala duwan ee "Step-Up" ah ee "Ideal" oo loogu talagalay iskutallaabta. Natiijo ahaan, noocyo kala duwan ayaa soo baxay, kaas oo loo aqoonsaday oo lagu soo bandhigay 1959 dii Diiwaanka Gobolka ee Tikidhada sare ee Ural, Vyatka iyo Galbeedka Siberian ee Ruushka.
Xilligan, Ural Ruby wuxuu si gaar ah ugu caan baxaa gobollada Chelyabinsk, Perm iyo Sverdlovsk.
Noocyada kala duwan
Ka fikir sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan nooca cherry ah. "Ural Ruby" waa baadiyaha yar yar leh laamo faafin.
Marka aad raadinayso noocyada kala duwan ee sawirkaaga, waxaad baran kartaa sifooyinka geedka Jukovsky, Lyubskaya, Black Large, Turgenevka, Vladimirskaya, Shokoladnitsa, Kharitonovskaya, Molodezhnaya.
Heerka Cherry waxay gaareysaa 1.5 m, mararka qaarkood waxay ku kori kartaa ilaa 1.8-2 m. Crohn ee kala duwan ee jilicsan ee la tixgeliyo celcelis la'aanta. Marka la abuuro, foomka oo dhan waxaa la sameeyaa laamo dhexdhexaad ah.
Miro ku jira geedkan waa koritaan sannadle ah iyo laamaha dhirta. Caleemaha, oo si muuqata u iftiimaya, qaabkooda waxay la mid yihiin doonta. Caleenta wuxuu leeyahay nooc ka mid ah caleenta maqaarka.
Miraha khudraddan waa guduud mugdi ah, oo cabbirka dhexdhexaad ah. Miisaankoodu wuxuu ku saabsan yahay 3.2 g oo ah nooca berry ah ayaa leh qaab isku dhafan, dhadhan macaan. Natiijada dhadhanka "Ural Ruby" ayaa ahaa 2.8 dhibcood. Miraha ay ka kooban tahay celcelis ahaan 9% sonkorta, 1.6% acids, iyo sidoo kale ilaa 15 mg oo fitamiin C. Casiirka midabka cas; stem waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah, si adag ugu xiran ilmaha caloosha; lafta yaryar, oo si haboon uga soocaya saxarka.
Ma taqaanaa? Lafaha iyo miraha cherry laguma cuni karo tiro badan, sababtoo ah waxay si fudud u sumoobi karaan.
Cherry this waa noocyo kala duwan oo is-kiniin ah, i.e. Geedku wuxuu leeyahay nooc gaar ah oo ah qaab-dhismeedka ubaxa. Tani waxay ka hortagtaa horumarka ubaxa sababtoo ah is-bacriminta manka ayaga.
Sidaa darteed, haddii aanay jirin pollinators on goobtaada, waxa ubaxi doonaa si quruxsan guga kasta, halka aan siin beergooyska. Sidaa darteed, hubi inaad daryeesho si ay u koraan agagaarka pollinators, kuwaas oo ku habboon noocyo kala duwan. Geedku waa hanti-rinjiye heer sare ah, kaas oo muddo tobanaan sano ah loo adeegsan jiray korriin iyo tarbiyo noocyo sarraysa oo ah john. Noocyada ugu wanaagsan ee loo yaqaan "Ruby Ural": "Mayak", "Zagrebinskaya", "Polevka", "Zvezdochka", "Alatyrskaya" iyo "Generous".
Miraha ay u bislaadaan goor dambe (qeybtii hore ee August) oo waxay ku dheggan yihiin laamaha muddo dheer. Fruiting waa istaahilaa sugitaanka sanad saddexaad ka dib markii geed lagu beeray.
Waxsoosaarka geedka ayaa aad u sarreeya, celcelis ahaan mid ka mid ah geedkan waxaad heli kartaa ilaa 6 kilo oo miro ah. Waxaa jiray xaalado markii aagga dhexe ee Ruushka goosashada geedka 14 ilaa 15 kg.
Geedka dhirta "Ural Ruby" wuxuu si wanaagsan ula qabsan karaa cimilada aan fiicnayn. Waxay leedahay caabbi barafeed wanaagsan. Wood waxay u adkeysan kartaa heerkulka -30-35 ° C.
Ma taqaanaa? Cherry waa u adkaysi u qabow. Warshadani waxay ku koraysaa duurka, xitaa Himalayas.
Cherry ripens goor dambe, dalagga ka soo waxaa loo isticmaalaa more for processing. Miraha noocan ah ee cherry waa la cuni karaa ceeriin, la qalajiyey ama la xafiday.
Waxaad ka samayn kartaa jajabyo, saxarado, jellies, sharoobada, tinctures, cabitaanka miraha, iyo biyaha miro ka soo berry. Caleemaha Ural Ruby waxaa lagu daraa qajaarka ama khudaarta kale.
Warshad Tani waxaa loo isticmaalaa in shinni, sida ay tahay dhirta malab fiican. Sidoo kale, cherry waxaa lagu beeray sidii warshad ornamental ah.
Qodobbada geedi socodka geedo yar yar
Si aad u qaadato xidid, waxaad u baahan tahay:
Xaq u yeelashada diyaarinta ceelka;
samee Bacriminta lagama maarmaanka ah;
raac shuruucda iyo farsamada dhulka;
doortaan waxyaabo tayo leh;
dhirta xilliga saxda ah ee sanadka.
Waqtiga ugu wanaagsan
Noockani waa cherry lagu beeray guga marka burooyinkuna ay ubaxu yihiin, ama illaa badhtamaha-deyrta. Laakiin beeritaanka guga waa ugu fiican ee loogu talagalay, sababtoo ah dayrta ka dib dhirta yar yar ayaa jabin kara haddii uu jiro dhaxan hore.
Qalabaynta waa in la beeraa halka ay jiraan wax badan oo qorrax ah iyo jiritaan joogto ah. Waxa kale oo muhiim ah in meeshii ay soo degtey ay jirin meelo biyo ah oo dhulka hoostiisa ah. Ciidda beeritaanka geedo waa inay noqdaan iftiin, dabacsan oo doorbidaya loamy.
Geedi socodka iyo qorshaha
Marka la beero noocyo baadiyaha ah, masaafada u dhexeysa waa in la sameeyaa laga bilaabo 2 mitir. Daloolka daloolka waa inuu ahaadaa 50 cm dhexroor iyo isla qoto dheer. Qeybta hoose ee godka waa in la dhigo bacarimiso, oo ka kooban humus, 20 g oo ah chloride potassium, ilaa 40 g of superphosphate iyo ash. Marka ciidda dhoobada ah ay weli ku dari karto hal baaldi oo ciid ah.
Dabadeed xayawaan ayaa loo wareejiyaa daloolka, kaas oo geedka loo xirxiray. Xididdada ayaa horay loo nadiifiyey waxyeello waxayna ku qooyeen 3 saacadood, ka dibna si taxadar leh ayaa loo yareeyey daloolka waxaana lagu daboolay carrada, si adag u dhuujinta ciidda.
Waa muhiim! Biyo waraabiyo ilaa laba ama saddex baaldiyo oo biyo diiriya oo diiran.
Si looga hortago in biyuhu aysan faafin inta lagu jiro waraabinta, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qalab rinjeexsan oo qashinka ah oo ku wareegsan sapling ee seedling, dhexroorka taas oo ah 60 cm. Haddii wax walba si sax ah loo sameeyo, ka dibna qoorta xididka geedka ka dib waraabinta iyo hoos u dhigaya ciidda waxay noqon doontaa heer dhulka. Haddii aad qalad samayso - ma cabsi! Tan waxaa lagu saxi karaa adoo garaaca dhulka ama qodaya ciidda xad-dhaafka ah. Ka dib markii laga beerto on cagta ee seedling waa in lagu shubaa mulch ee foomka dhadday ama compost.
Noocyada daryeelka xilliyeed ee jeeriga
Daryeelidda Ural Ruby Cherry ka dib markii laga beerto geedku kama duwo waxyaalaha loo baahan yahay dhammaan dhirta noocan ah: Bacriminta, waraabinta, laamood ee laamihii hore iyo dabcinta ciidda haddii loo baahdo.
Waraabinta iyo dabacsanaanta
Inta lagu jiro xilli sii kordhaya, 3-4 waraabinta waxay ku filnaan doontaa in jeeriga la sameeyo inta lagu jiro marxaladaha horumarinta geedka:
marka ugu horaysa geed waa in la waraabiyo ka dib ubax;
waraabinta labaad waxay dhacdaa xilliga sameysashada ugxan-la'aanta (ka dib jimicsiga bisha June);
waraabinta saddexaad waa in la sameeyaa ka dib goosashada ama xilliga dayrta;
Cabbitaanka 4aad - podzimny, bartamihii Oktoobar.
Qiyaasta waraabka daaqsinka ee geedka waa 5-7 baaldiyo geed oo ku xiran da'da.
Bacriminta, oo ay ku jiraan potassium iyo fosfooraska, ayaa la soo bandhigaa xilliga dayrta, si ay geeddi-socodkani ugu dhaco qashin. Walxaha dabiiciga ah (compost ama digada lagu beeray) waxaa lagu daraa seddexdii sanoba mar. Nitrogar waxaa la soo saaray guga, midigta ka hooseysa baadiyaha geedka.
Isla markaa waa lagama maarmaan in la sameeyo laba quudin dheeraad ah. Ugu horeysay waxay dhacdaa inta lagu jiro ubax, labaad - 14 maalmood ka dib joojinta, ujeedadaas, duufaan iyo ash ayaa loo isticmaalaa.
Taageerayaasha xaalada jidhka, waa muhiim in la ogaado sifooyinka isticmaalka dhuxusha, idaha, doofaarka, bakayle, faras, digada lo'da, digada digaag sida bacrimin, iyo sidoo kale hababka loo diyaariyo dhar gogol ah, maraq, ammonia.
La dagaallanka cudurada iyo cayayaanka
Ural Rubinovaya si fiican ayey u diidan tahay cherry aphid iyo sawfly, laakiin wuxuu yeelan karaa cudur fungal ah - cocomycosis. Waxaa suurtogal ah in laga hadlo cudurka infakshanka fungus, haddii dhibco caleemo leh caleemaha laga helo geed, iyo sidoo kale dareenka deg dega ah ee saaxiibtinimo, oo dhacay waqti ka hor waqtiga la aasaasay, ayaa la ogaaday.
Tani waa khatar aad u ah geed, sababtoo ah warshad qashin ah ma awoodo in ay si caadi ah wax u cunaan. Natiijo ahaan, waxay si deg deg ah u daciifisaa, taas oo waqti dambe ay keeni karto dhimashadiisa. Si looga hortago in tan dhacdo, geedka waa in lagu daaweeyaa caawinta fungicides (Copper sulfate, Topaz, Rayok, Horus, Abiga-Peak).
Waa muhiim! Haddii geedka jiran yahay, waa in lagu daaweeyo fungicides saddex jeer xilli - ka hor ubax, inta lagu jiro iyo saddex toddobaad ka dib ubax.
Dhismaha burburinta iyo taaga
Waa in la gooyaa geedka ka hor inta ku hari ilkaha u muuqda, sidaas awgeed dhirtu waxay leedahay waqti si ay u hesho xoog inta lagu jiro muddada koritaanka firfircoon iyo ubax.
Ka dib markii laga beerto abuuritaanka, waa in laga tagaa ilaa 10 ka mid ah laanta horumarsan iyo kan ugu xooggan (qiyaastii 5 laamood ayaa loo hayaa geedaha). Laamaha haray waa la jarjaraa adigoon ka tagin xeedhada, meesha gooyana waa in isla markiiba lagu dhajiyo garoonka beerta.
Laamihii ku sugnaa gudniinka waa in ay eegaan jihooyin kala duwan oo ka duwan midba midka kale fogaan 10 cm.
Xeerarka ugu muhiimsan ee la gooyey jeexjeexyada dhallinyarada:
ee sanadka labaad, laamaha sii kordhaya gudaha taajka waa la xidhay, iyo caleemaha sameeyay on shtambu fasax off xagaaga (inta ay cagaaran yihiin). Tani waxay gacan ka geysan doontaa ka hortagga burcadka;
waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo caleemaha koray in ka badan nus mitir dhererka;
inta lagu jiro koritaanka jeeriga, laamaha cusub ee qalfoofka waa in laga tagaa jirida. Tani waxay kaa caawineysaa inaad si sax ah u sameyso taajkii. Natiijo ahaan, laanta ugu muhiimsan waxay ahaan doontaa 12-15;
Macdanta qalalan iyo bukaanka waa in laga saaraa sanad walba.
Tijaabinta taajka iyo jarjarida laan aan loo baahnayn ayaa faa'iido u leh dhowr xaaladood:
abuurka saxda ah ee geedka, si aysan u noqon doonin hal dhinac ah oo leh taaj culus;
beergoosadka ayaa kor u soo bixi doona,
berry wuxuu noqon doonaa wax badan oo aad ufiican ee dhadhanka;
Kala saarista laamaha jirran iyo bukaanka difaaca geedka cayayaanka;
Geedku wuxuu ku koraa da 'yar kadib markii uu gooyo oo uu weynaado.
Waa muhiim! Iska yaree cherry waa inuu sanad walba ka soo da 'yar.
Ka ilaalinta qabow iyo jiirka
Si aad u ilaaliso jeeriga ka hor dhaxan, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qiiqa: subaxdii hore marka barafku bilaabo beerta, cawska cawska, cagaarka ama qalabka kale ee la midka ah waa in la dhigaa dab. Isla mar ahaantaana, waa inay noqdaan kuwo qoyan, si aysan dabka u jirin, laakiin qiiq badan. Geedka ayaa loo ilaalin karaa si kale - in la daahiyo waqtiga uu ubax. Tani waxay yareyneysaa fursada garaacida soo celinta. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad barafka ku dhuujisaa hareeraha hareeraha, kadibna ku dabool lakabka waaweyn ee cawska ama lo'da.
Ka ilaali cherry ka soo jiirka Waxaad isticmaali kartaa qoryaha qoryaha, chips peat ama lagu qooyay kookoolin ama balka galka leh. Tani waxay ka cabsiisaa jiirka. Intaa waxaa dheer, bisadaha iyo boodhadhku waa kaaliyaal wanaagsan oo la dagaallanka iyaga.
Kalluunka ma jecla uraha qaar. Sidaa darteed, bannaanka qaar ka mid ah ayaa lagula talinayaa in ay ku buufin geedaha leh xal milatari ama ku daa iyaga oo leh hilib doofaar ah ama tar.
"Ural Ruby" waxaa loo isticmaalaa miraha miraha. Falanqaynta ee bannaanka u saabsan noocan oo kale ah cherry yihiin kaliya ugu fiican. Waa gaar ahaan qiimo leh sababtoo ah caabbinta dhaxan, goosashada hodan ah iyo iska caabinta cuduro badan oo fangas ah. Faa'iidooyinka ay ka mid yihiin: isdabamarin iyo midabyo dhadhan dhexdhexaad ah.